Ny Fanahy Masina - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny Fanahy Masina
Ny Fanahy Masina no persona fahatelon’ny Andriamanitra ary mivoaka mandrakizay amin’ny Ray amin’ny alalan’ny Zanaka. Izy no mpampionona nampanantenain’i Jesosy Kristy izay nirahin’Andriamanitra ho an’ny mino rehetra. Ny Fanahy Masina no mitoetra ao anatintsika, mampiray antsika amin’ny Ray sy ny Zanaka, ary manova antsika amin’ny alalan’ny fibebahana sy ny fanamasinana, ary mampitovy antsika amin’ny endrik’i Kristy amin’ny alalan’ny fanavaozana tsy tapaka. Ny Fanahy Masina no loharanon’ny fitaomam-panahy sy ny faminaniana ao amin’ny Baiboly ary loharanon’ny firaisan-kina sy fiombonana ao amin’ny Fiangonana. Manome fanomezam-pahasoavana ara-panahy ho an’ny asan’ny filazantsara izy ary mpitari-dalana tsy tapaka ho an’ny kristiana amin’ny fahamarinana rehetra. (Jaona 14,16; 15,26; Asan'ny Apostoly 2,4.17-19.38; Matio 28,19; Jaona 14,17-26; 1 Petera 1,2; TITOSY 3,5; 2. Petrus 1,21; 1. Korintiana 12,13; 2. Korintiana 13,13; 1. Korintiana 12,1-11; Asan’ny Apostoly 20,28:1; Jaona 6,13)
Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra
Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra miasa - mamorona, miteny, manova, mitoetra ao anatintsika, miasa ao amintsika. Na dia afaka manao io asa io aza ny Fanahy Masina tsy misy ny fahalalana, dia manampy kosa ny fahalalana bebe kokoa.
Ny Fanahy Masina dia manana ny toetran’Andriamanitra, mitovy amin’Andriamanitra, ary manao asa izay Andriamanitra irery ihany no manao. Tahaka an'Andriamanitra, ny Fanahy dia masina - masina tokoa ka ny fanafintohinana ny Fanahy Masina dia fahotana lehibe tahaka ny fanitsakitsahana ny Zanak'Andriamanitra (Hebreo). 10,29). Ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina dia iray amin’ireo fahotana tsy azo avela (Matio 12,31). Midika izany fa masina ny fanahy, izany hoe tsy manana fahamasinana nomena fotsiny, toy ny tamin’ny tempoly.
Tahaka an’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia mandrakizay (Hebreo 9,14). Tahaka an’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia eny rehetra eny9,7-10). Tahaka an’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia mahalala ny zavatra rehetra (1. Korintiana 2,10-11; Jaona 14,26). Ny Fanahy Masina no mamorona (Joba 33,4; Salamo 104,30) ary manao fahagagana (Matio 12,28; Romana 15:18-19) amin’ny fanaovana ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fanompoana azy. Ao amin'ny andalan-tsoratra maromaro ao amin'ny Baiboly, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia lazaina ho mitovy amin'Andriamanitra. Ao amin’ny andalan-teny iray momba ny “fanomezan’ny Fanahy” i Paoly dia mametraka ny fanahy “iray”, dia ny Tompo “iray” ary Andriamanitra “iray” (1 Kor.2,4-6). Mamarana ny taratasy izy amin’ny alalan’ny vavaka fizarazarana telo (2 Kor. 13,13). Ary i Petera dia mampiditra taratasy iray miaraka amin'ny raikipohy mizara telo hafa (1. Petrus 1,2). Tsy porofon’ny firaisankina ireo fa manohana izany.
Ny firaisan-kina dia vao mainka miharihary kokoa ao amin’ilay raikipohy amin’ny batisa: “[manao batisa] amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina” (Matio 2.8,19). Ny telo dia manana anarana tokana, famantarana ny enti-manana, misy.
Rehefa manao zavatra ny Fanahy Masina dia manao izany Andriamanitra. Rehefa miteny ny Fanahy Masina dia Andriamanitra no miteny. Rehefa nandainga tamin’ny Fanahy Masina i Ananiasy, dia nandainga tamin’Andriamanitra izy (Asa 5,3-4). Araka ny voalazan’i Petera, i Ananiasy dia tsy nandainga tamin’ny solon’Andriamanitra ihany fa tamin’Andriamanitra mihitsy. Tsy afaka "mandainga" amin'ny hery tsy misy olona ianao.
Nisy fotoana nilazan’i Paoly fa mampiasa ny tempolin’ny Fanahy Masina ny Kristianina (1 Kor 6,19), any amin’ny toerana hafa fa tempolin’Andriamanitra isika (1. Korintiana 3,16). Ny tempoly dia natao hivavahana amin’Andriamanitra, fa tsy hery tsy misy olona. Rehefa nanoratra momba ny “Tempolin’ny Fanahy Masina” i Paoly dia nilaza ankolaka hoe: Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra.
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1 koa3,2 ampitoviana amin’Andriamanitra ny Fanahy Masina: “Fa raha nanompo ny Tompo sy nifady hanina izy ireo, dia hoy ny Fanahy Masina: Atokàny amin’i Barnabasy sy Saoly Aho ho amin’ny asa izay niantsoako azy”. Eto dia miteny amin’ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina. Mitovy amin’izany koa, dia nilaza izy fa “nanandrana sy nizaha toetra” azy ny Isiraelita, ary “tamin’ny fahatezerako no nianianako fa tsy ho tonga any amin’ny fitsaharako hianareo.” ( Hebreo. 3,7- iray).
Na izany aza, ny Fanahy Masina dia tsy anarana solon’Andriamanitra fotsiny. Ny Fanahy Masina dia hafa noho ny Ray sy ny Zanaka; B. naseho tamin’ny batisan’i Jesosy (Mat 3,16-17). Samy hafa izy telo ireo, fa iray ihany.
Ny Fanahy Masina no manao ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. “Zanak’Andriamanitra” isika, izany hoe naterak’Andriamanitra (Jao 1,12), izay mifanitsy amin’ny hoe “ateraky ny Fanahy” (Johanes 3,5-6). Ny Fanahy Masina no fisaorana izay itoeran’Andriamanitra ao anatintsika (Efesiana 2,22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Ny Fanahy Masina no mitoetra ao anatintsika (Romana 8,11; 1. Korintiana 3,16) - ary satria mitoetra ao anatintsika ny Fanahy, dia afaka milaza isika fa mitoetra ao anatintsika Andriamanitra.
Ny saina manokana
Ny Baiboly dia mampiavaka ny Fanahy Masina.
Velona ny fanahy (Romana 8,11; 1. Korintiana 3,16)
Ny Fanahy no miteny (Asa 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1. Timoty 4,1; Hebreo 3,7 sns.).
Ny Fanahy indraindray dia mampiasa ny mpisolo tena hoe “izaho” (Asa 10,20; 13,2).
Ny fanahy dia azo itenenana, alaim-panahy, mampalahelo, tevatevaina, miteny ratsy (Asa. 5. 3. 9; Efesianina 4,30;
Hebreo 10,29; Matio 12,31).
Ny Fanahy no mitarika, maneho, miantso, mamporisika (Romana 8,14. 26; Asan’ny Apostoly 13,2; 20,28).
Romana 8,27 miresaka momba ny "fahatsapan'ny fanahy". Mieritreritra sy mitsara izy - ny fanapahan-kevitra iray dia "mampifaly" azy (Asa 15,28). Ny fanahy "mahafantatra", ny fanahy "manome" (1. Korintiana 2,11; 12,11). Tsy hery tsy misy olona izany.
Antsoin'i Jesosy hoe parakletos ny Fanahy Masina - amin'ny teny grika ao amin'ny Testamenta Vaovao - midika hoe mpampionona, mpisolovava, mpanohana. "Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin'ny fahamarinana..." (Jaona 1.4,16-17). Tahaka an’i Jesosy, dia mampianatra ny Fanahy Masina, ilay Mpampionona voalohany ny mpianatra, Izy no mijoro ho vavolombelona, ​​manokatra maso, mitarika ary manambara ny fahamarinana.4,26; 15,26; 16,8 ary 13-14). Andraikitra manokana ireo.
Mampiasa ny endrika masculine parakletos i Jaona; tsy nilaina ny nametraka ny teny tao amin'ny neuter. Ao amin’ny Jaona 16,14 Ny mpisolo tena lahy ("er") koa dia ampiasaina amin'ny teny grika, mifandray amin'ilay teny hoe "Geist" raha ny marina. Mety ho mora ny nifindra tamin'ny mpisolo anarana tsy neuter ("izy"), saingy tsy nanao izany i Johannes. Ny fanahy dia mety ho lahy ("izy"). Mazava ho azy fa tsy misy dikany ny fitsipi-pitenenana eto; ny zava-dehibe dia manana toetra manokana ny Fanahy Masina. Tsy hery tsy miandany izy, fa ilay mpanampy manan-tsaina sy masina izay mitoetra ao anatintsika.
Ny fanahy ao amin'ny Testamenta Taloha
Ny Baiboly dia tsy manana ny toko na ny bokiny izay mitondra ny lohateny hoe "Ny Fanahy Masina". Mianatra kely momba ny fanahy eto isika, somary kely, na aiza na aiza misy ny Soratra Masina miresaka momba ny asany. Kely ihany ny hita ao amin'ny Testamenta Taloha.
Ny fanahy dia nandray anjara tamin'ny famoronana ny aina ary nandray anjara tamin'ny fikojakojana azy (1. Mosesy 1,2; Joba 33,4; 34,14). Ny Fanahin’Andriamanitra dia nameno an’i Bezazela tamin’ny “fahamendrehana rehetra” mba hanorenana ny tabernakely (2. Mosesy 31,3-5). Izy no nahatanteraka an'i Mosesy ary nifehy ny loholona fito-polo (4. Mosesy 11,25). Nofenoiny fahendrena i Josoa ary nomeny hery na fahaizana hiady i Samsona sy ireo mpitarika hafa4,9; Mpitsara [space]]6,34; 14,6).
Nomena an’i Saoly ny Fanahin’Andriamanitra ary nesorina indray tatỳ aoriana (1. Samuel 10,6; 16,14). Ny Fanahy no nanome an’i Davida drafitra momba ny tempoly8,12). Ny Fanahy dia nanentana ny mpaminany mba hiteny (4. Mosesy 24,2; 2. Samoela 23,2; 1Ta 12,19; 2Ta 15,1; 20,14; Ezekiel 11,5; ZAKARIA 7,12; 2. Petrus 1,21).
Ao amin’ny Testamenta Vaovao koa, ny fanahy dia nanome hery ny olona hiteny, ohatra, i Elizabeta, i Zakaria ary i Simeona (Lio. 1,41. 67; 2,25-32). I Jaona Mpanao Batisa dia feno ny Fanahy hatrany am-bohoka (Lio 1,15). Ny zavatra lehibe indrindra nataony dia ny fanambarana ny fiavian’i Jesosy, izay tsy maintsy nanao batisa ny olona tsy tamin’ny rano ihany, fa “amin’ny Fanahy Masina sy ny afo” (Lio. 3,16).
Ny fanahy sy Jesosy
Nitana anjara toerana lehibe teo amin’ny fiainan’i Jesosy foana ny Fanahy Masina. Izy no niteraka an’i Jesosy (Mat 1,20), nidina taminy rehefa natao batisa izy (Mat 3,16), nitondra an’i Jesoa tany an’efitra (Lio 4,1) ary nanosotra Azy ho mpitory ny filazantsara (Lio 4,18). Tamin’ny alalan’ny “Fanahin’Andriamanitra” no nandroahany ny fanahy ratsy (Matio 12,28). Tamin’ny alalan’ny Fanahy no nanolorany ny tenany ho fanatitra noho ny ota (Hebreo 9,14), ary izany Fanahy izany ihany no nananganana azy tamin’ny maty (Romana 8,11).
Nampianatra i Jesoa fa amin’ny fotoan’ny fanenjehana dia hiteny amin’ny alalan’ny mpianatra ny Fanahy (Mat 10,19-20). Nampianatra azy ireo hanao batisa mpianatra vaovao “amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina” izy (Matio 2 Kor.8,19). Nampanantena Andriamanitra fa hanome ny Fanahy Masina ho an’izay rehetra mangataka aminy (Lk
Hita ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona ny fampianaran’i Jesosy momba ny Fanahy Masina. Voalohany indrindra, ny olombelona dia tsy maintsy “ateraky ny rano sy ny Fanahy” (Joan 3,5). Mila fahaterahana indray ara-panahy izy, ary tsy afaka avy amin’ny tenany izany: fanomezana avy amin’Andriamanitra izany. Na dia tsy hita maso aza ny Fanahy, dia mitondra fiovana mazava eo amin’ny fiainantsika ny Fanahy Masina (and. 8).
Nampianatra koa i Jesosy hoe: «Na iza na iza mangetaheta, manatona ahy ka misotroa! Na zovy na zovy no mino Ahy, dia hisy onin'ny rano velona miboiboika avy amin'ny tenany », hoy ny Soratra Masina» (Jao. 7: 37-38). I Jaona dia namela avy hatrany ny fandikana azy: "Izao no nolazainy ny amin'ny Fanahy izay tokony horaisin'izay mino azy ..." (and 39). Ny Fanahy Masina dia mamaky hetaheta anaty. Manome antsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra Izy, Izay nahariana antsika. Amin'ny fanatonana an'i Jesosy dia mahazo ny Fanahy sy ny Fanahy isika afaka mameno ny fiainantsika.
Mandra-pahatongan’izany, hoy i Jaona, dia mbola tsy nilatsaka tamin’ny ankapobeny ny Fanahy: “mbola tsy tao ny Fanahy; fa Jesosy tsy mbola nomena voninahitra” (and. 39). Na dia talohan'i Jesosy aza dia nameno ny lehilahy sy ny vehivavy tsirairay ny Fanahy, fa ankehitriny dia ho tonga amin'ny fomba vaovao sy mahery kokoa - amin'ny fetin'ny Pentekosta. Tsy milatsaka tsirairay intsony ny fanahy fa miaraka. Izay “nantsoin’Andriamanitra” sy atao batisa dia mandray azy (Asa 2,38- iray).
Nampanantena i Jesosy fa homena ny mpianany ny Fanahin’ny fahamarinana ary hitoetra ao anatin’izy ireo izany Fanahy izany4,16-18). Izany dia mitovy amin’ny fahatongavan’i Jesosy tamin’ny mpianany (and. 18), satria ny Fanahin’i Jesosy sy ny Fanahin’ny Ray no nirahin’i Jesosy sy ny Ray (Jaona 1.5,26). Ny Fanahy no mahatonga an’i Jesosy ho azon’ny olona rehetra ary manohy ny asany.
Araka ny tenin’i Jesosy, ny Fanahy dia tokony “hampianatra ny mpianatra ny zavatra rehetra” sy “mampahatsiaro azy izay rehetra nolazaiko taminareo.” ( Jaona 1 Kor.4,26). Ny Fanahy dia nampianatra azy ireo zavatra tsy takatry ny saina talohan’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty6,12- iray).
Ny Fanahy dia manambara an’i Jesosy (Jaona 15,26; 16,14). Tsy mampiely ny tenany izy, fa mitarika ny olona ho amin’i Jesosy Kristy sy ny Ray. Tsy miteny “avy amin’ny tenany” izy, fa araka ny sitrapon’ny Ray ihany (Jaona 16,13). Ary satria afaka mitoetra ao anatin’ny olona an-tapitrisany ny Fanahy, dia tombony ho antsika ny niakaran’i Jesosy tany an-danitra ka nandefa ny Fanahy ho amintsika (Jaona 16:7).
Ny Fanahy miasa amin'ny fitoriana filazantsara; Izy no manazava an'izao tontolo izao ny fahotany, ny helony, ny filàny fahamarinana ary ny fihavian'ny fitsarana (and.8-10). Ny Fanahy Masina dia manondro an'i Jesosy ho olona izay manavotra ny heloky ny olona rehetra ary loharanon'ny fahamarinana.
I Jaona Mpanao Batisa dia naminany fa Jesosy dia hanao batisa ny olona “amin’ny Fanahy Masina” (Mar 1,8). Nitranga izany taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty tamin’ny andro Pentekosta, rehefa namelona indray ny mpianatra tamin’ny fomba mahagaga ny Fanahy ( Asa. 2 ). Anisan’ny fahagagana koa ny nandrenesan’ny olona ny mpianatra niteny tamin’ny fiteny vahiny (and. 6). Nitranga imbetsaka ny fahagagana toy izany rehefa nitombo sy nivelatra ny Fiangonana (Asa 10,44-46; 19,1-6). Amin’ny maha mpahay tantara azy, dia mitatitra momba ny fisehoan-javatra tsy mahazatra sy mahazatra i Lukas. Tsy misy na inona na inona milaza fa nitranga tamin’ny mpino vaovao rehetra ireo fahagagana ireo.
Paoly dia milaza fa ny mino rehetra dia atao batisa ho tena iray amin'ny alalan'ny Fanahy Masina - ny Fiangonana (1. Korintiana 12,13). Nomena ny Fanahy Masina izay rehetra mino (Romana 10,13; Galatianina 3,14). Na misy fahagagana miaraka na tsy misy, ny mino rehetra dia atao batisa amin’ny Fanahy Masina. Tsy ilaina ny mijery fahagagana ho porofo miavaka sy mazava tsara momba izany. Ny Baiboly dia tsy mitaky ny hanaovan’ny mpino rehetra batisa amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Fa kosa, miantso ny mpino tsirairay mba ho feno ny Fanahy Masina mandrakariva (Efesiana 5,18) - hanaraka an-tsitrapo ny fitarihan’ny Fanahy. Adidy mitohy izany fa tsy indray mandeha.
Raha tokony hitady fahagagana isika dia tokony hitady an’Andriamanitra ary avelantsika ho an’Andriamanitra ny hanapa-kevitra na hisy fahagagana hitranga na tsia. Matetika i Paoly dia tsy milazalaza ny herin’Andriamanitra amin’ny teny toy ny fahagagana, fa amin’ny teny izay maneho ny hery anaty: ny fanantenana, ny fitiavana, ny fahari-po sy ny faharetana, ny fahavononana hanompo, ny fahatakarana, ny fahasahiana hiaritra ary ny fahasahiana amin’ny fitoriana (Romana 1.5,13; 2. Korintiana 12,9; Efesianina 3,7 u. 16-17; Kolosiana 1,11 sy 28-29; 2. Timoty 1,7- iray).
Ny Asan’ny Apostoly dia mampiseho fa ny Fanahy no hery tao ambadiky ny fitomboan’ny Fiangonana. Ny Fanahy no nanome hery ny mpianatra hijoro ho vavolombelona momba an’i Jesoa (Asa 1,8). Nomeny hery lehibe fandresen-dahatra izy ireo tamin’ny toriteniny (Asan’ny Apostoly 4,8 & 31; 6,10). Nanome ny toromarika ho an’i Filipo izy ary nampiakatra azy tatỳ aoriana (Asa 8,29 ny u. 39).
Ny Fanahy no nampahery ny fiangonana sy nanangana olona hitarika azy (Asa 9,31;
20,28). Niresaka tamin’i Petera sy ny fiangonan’i Antiokia Izy (Asa 10,19; 11,12; 13,2). Nilaza tamin’i Agabo izy mba hilaza mialoha ny mosary ary i Paoly hanozona (Asa 11,28; 13,9-11). Izy no nitarika an’i Paoly sy Barnabasy tamin’ny diany (Asa 13,4; 16,6-7) ary nanampy ny Fiangonan’ny Apostoly tany Jerosalema handray fanapahan-kevitra (Asa 15,28). Naniraka an’i Paoly tany Jerosalema izy ary naminany izay hitranga any (Asa. 20,22:23-2; ).1,11). Ny Fiangonana dia nisy ary nitombo ihany satria ny Fanahy no niasa tao amin’ny mino.
Ny fanahy sy ny tsy mivadika ankehitriny
Andriamanitra Fanahy Masina dia voakasika mafy amin'ny fiainan'ny mpino ankehitriny.
Mitarika antsika ho amin’ny fibebahana Izy ary manome antsika fiainana vaovao (Jaona 16,8; 3,5- iray).
Izy no mitoetra ao anatintsika, mampianatra antsika, mitarika antsika (1. Korintiana 2,10-13; Jaona 14,16-17 & 26; Romana 8,14). Mitarika antsika amin’ny alalan’ny soratra masina, amin’ny alalan’ny vavaka, ary amin’ny alalan’ny Kristianina hafa Izy.
Izy no fanahin’ny fahendrena izay manampy antsika hieritreritra amin’ny fanapahan-kevitra ho avy amim-pahatokiana, fitiavana ary fahamalinana (Efesiana). 1,17; 2. Timoty 1,7).
Ny Fanahy dia “mamora” ny fontsika, manisy tombo-kase sy manamasina antsika, ary manokan-tena ho amin’ny fikasan’Andriamanitra (Romana). 2,29; Efesianina 1,14).
Izy no mitondra ny fitiavana sy ny vokatry ny fahamarinana ho ao anatintsika (Romana 5,5; Efesianina 5,9; Galatianina 5,22- iray).
Mametraka antsika ao amin’ny fiangonana Izy ary manampy antsika hahafantatra fa zanak’Andriamanitra isika (1. Korintiana 12,13; Romana 8,14- iray).
Tokony hivavaka amin’Andriamanitra “ao amin’ny Fanahin’Andriamanitra” isika amin’ny fitarihana ny saintsika sy ny ezaka ataontsika ho amin’izay sitrapon’ny Fanahy (Filipiana). 3,3; 2. Korintiana 3,6; Romana 7,6; 8,4-5). Miezaka manao izay tiany isika (Galatiana 6,8). Rehefa tarihin’ny Fanahy isika dia manome antsika fiainana sy fiadanana (Romana 8,6). Izy no manome antsika fahafahana ho any amin’ny Ray (Efes 2,18). Mijoro eo anilantsika amin’ny fahalementsika Izy, “misolo tena” antsika, izany hoe mijoro ho antsika miaraka amin’ny Ray (Romana). 8,26- iray).
Izy koa dia manome fanomezam-pahasoavana ara-panahy, izay mahafeno fepetra ho amin’ny toeran’ny mpitarika ao amin’ny fiangonana (Efesiana 4,11), ho amin’ny birao samihafa (Romana 12,6-8), ary talenta sasany ho an'ny asa miavaka (1. Korintiana 12,4-11). Tsy misy manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra amin’ny fotoana iray, ary tsy misy fanomezana omena an’izay rehetra tsy an-kanavaka (and. 28-30). Ny fanomezam-pahasoavana rehetra, na ara-panahy na “voajanahary”, dia tokony hampiasaina ho amin’ny soa iombonana sy hanompoana ny Fiangonana manontolo (1. Korintiana 12,7; 14,12). Zava-dehibe ny fanomezana rehetra (1. Korintiana 12,22- iray).
Mbola tsy manana afa-tsy ny “voaloham-bokatra” avy amin’ny Fanahy isika, dia antoka voalohany izay mampanantena antsika mihoatra lavitra noho ny ho avy (Romana). 8,23; 2. Korintiana 1,22; 5,5; Efesianina 1,13- iray).
Ny Fanahy Masina no Andriamanitra miasa eo amin’ny fiainantsika. Ny zavatra rehetra ataon’Andriamanitra dia ataon’ny Fanahy. Izany no niantsoan’i Paoly antsika hoe: “Raha velon’ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy... aza mampalahelo ny Fanahy Masina... aza mampahatezitra ny Fanahy” (Galatianina). 5,25; Efesianina 4,30; 1th. 5,19). Aoka àry isika hihaino tsara izay lazain’ny fanahy. Rehefa miteny izy dia miteny Andriamanitra.